1 Kutanga kwemashoko akanaka pamusoro paJesu Kristu: 2 Sokunyorwa kwazvakaitwa mubhuku romuprofita Isaya, kuti: “(Tarira! ndiri kutuma nhume yangu pamberi pako, ichagadzira nzira yako;)+ 3 teererai! mumwe munhu ari kushevedzera ari murenje, achiti, ‘Gadzirai nzira yaJehovha, ruramisai migwagwa yake,’”+ 4 Johani mubhabhatidzi akaoneka murenje, achiparidza rubhabhatidzo rwokuratidza kupfidza kuti vakanganwirwe zvivi.+ 5 Naizvozvo nharaunda yose yeJudhiya nevagari vose vomuJerusarema vakabuda vakaenda kwaaiva, vakabhabhatidzwa naye muRwizi rwaJodhani, vachireurura pachena zvivi zvavo.+ 6 Zvino Johani akanga akapfeka mvere dzengamera nebhandi reganda muchiuno chake,+ uye aidya mhashu+ nouchi hwomusango.+ 7 Aiparidza, achiti: “Shure kwangu kuri kuuya mumwe munhu akasimba kupfuura zvandakaita; handina kukodzera kukotama uye kusunungura tambo dzehwashu dzake.+ 8 Ini ndakakubhabhatidzai nemvura, asi iye achakubhabhatidzai nomudzimu mutsvene.”+ 9 Mumazuva iwayo Jesu akabva kuNazareta reGarireya, akabhabhatidzwa muJodhani naJohani.+ 10 Achangobva kubuda mumvura akaona matenga achiparadzana, uye, mudzimu uchiburukira paari wakaita senjiva;+ 11 uye inzwi rakabva kumatenga richiti: “Ndiwe Mwanakomana wangu, anodiwa; ndakufarira.”+ 12 Zvino mudzimu wakabva wamugombedzera kupinda murenje.+ 13 Naizvozvo akaramba ari murenje kwemazuva makumi mana,+ achiedzwa naSatani,+ uye akanga aine mhuka dzomusango, asi ngirozi dzakanga dzichimushumira.+ 14 Zvino pashure pokunge Johani asungwa, Jesu akapinda muGarireya,+ achiparidza mashoko akanaka aMwari,+ 15 achiti: “Nguva yakatarwa yakwana,+ uye umambo hwaMwari hwaswedera pedyo. Pfidzai,+ uye tendai mashoko akanaka.” 16 Paakanga achifamba murutivi rwegungwa reGarireya akaona Simoni+ naAndreya munun’una waSimoni vachikanda mambure avo mugungwa, nokuti vaiva vabati vehove.+ 17 Naizvozvo Jesu akati kwavari: “Nditeverei, uye ndichaita kuti muve vabati vevanhu.”+ 18 Vakabva vasiya mambure avo, vakamutevera.+ 19 Zvino ati fambei zvishoma, akaona Jakobho mwanakomana waZebhedhi naJohani munun’una wake, pavakanga vari muchikepe chavo vachigadzira mambure avo;+ 20 uye pakarepo akavashevedza. Ivowo vakasiya baba vavo Zebhedhi vari muchikepe vaine vanhu vemaricho, vakamutevera. 21 Zvino vakapinda muKapenaume.+ Sabata richangotanga iye akapinda musinagogi, akatanga kudzidzisa. 22 Ivo vakashamiswa nemadzidzisiro ake,+ nokuti imomo akanga achivadzidzisa somunhu ane chiremera, kwete sevanyori.+ 23 Uyewo, panguva iyoyo chaiyo musinagogi ravo maiva nomumwe munhu akanga akabatwa nesimba romudzimu usina kuchena, uye akashevedzera,+ 24 achiti: “Tinei nemi, imi Jesu wokuNazareta?+ Mauya kuzotiparadza here? Ndinonyatsoziva+ kuti ndimi ani, Mutsvene+ waMwari.”+ 25 Asi Jesu akautuka, achiti: “Nyarara, ubude maari!”+ 26 Zvino pashure pokunge mudzimu usina kuchena waita kuti agwinhe uye uchishevedzera nenzwi rawo rose, wakabuda maari.+ 27 Naizvozvo, vanhu vose vakakatyamadzwa kwazvo zvokuti vakatanga kutaurirana, vachiti: “Chii ichi? Kudzidzisa kutsva! Anorayira nesimba kunyange midzimu isina kuchena, uye inomuteerera.”+ 28 Naizvozvo mashoko pamusoro pake akabva angopararira kwose kwose munyika yose, kumativi ose muGarireya.+ 29 Vakabva vangobuda musinagogi, vakapinda mumusha maSimoni+ naAndreya vaina Jakobho naJohani. 30 Zvino amai vomudzimai waSimoni+ vakanga varere vachirwara nefivha,+ uye vakabva vangomuudza pamusoro pavo. 31 Achienda kwavari akavasimudza, akavabata ruoko; uye fivha yakapera,+ ivo vakatanga kuvashumira.+ 32 Ava manheru, zuva parakanga ravira, vanhu vakatanga kuuya kwaari navose vakanga vachirwara+ nevaya vaiva nemadhimoni;+ 33 uye guta rose rakanga rakaungana pasuo chaipo. 34 Naizvozvo akarapa vazhinji vakanga vachirwara nezvirwere zvakasiyana-siyana,+ uye akadzinga madhimoni mazhinji, asi aisabvumira madhimoni acho kuti ataure, nokuti iwo aimuziva kuti ndiKristu.+ 35 Zvino mangwanani-ngwanani, kuchine rima, akamuka, akabuda panze, akaenda kunzvimbo yakanga isina vanhu,+ uye ikoko akatanga kunyengetera.+ 36 Zvisinei, Simoni nevaya vaaiva navo vakanyatsomutsvaka, 37 vakamuwana, vakati kwaari: “Vose vari kukutsvakai.” 38 Asi iye akati kwavari: “Ngatiendei kune imwe nzvimbo, mumataundi omumusha ari pedyo, kuti ndiparidze+ ikokowo, nokuti ndakauyira izvozvo.”+ 39 Uye akaenda, achiparidza mumasinagogi avo muGarireya yose achidzinga madhimoni.+ 40 Mumwe munhu aiva nemaperembudzi akauyawo kwaari, achimuteterera akatopfugama, achiti kwaari: “Kana muchida henyu, munogona kundichenesa.”+ 41 Iye akasiririswa,+ uye akatambanudza ruoko rwake, akamubata, akati kwaari: “Ndinoda. Cheneswa.”+ 42 Maperembudzi acho akabva angonyangarika paari, akabva achena.+ 43 Uyezve, akamurayira kwazvo uye akabva amuendesa, 44 akati kwaari: “Ona kuti hapana munhu waunoudza chinhu, asi enda uzviratidze kumupristi,+ upe zvinhu zvakarayirwa naMosesi+ nokuda kwokucheneswa kwako, kuti zvive uchapupu kwavari.”+ 45 Asi aenda, murume wacho akatanga kuzvizivisa kwazvo uye kuparadzira nyaya yacho kwose kwose, zvokuti Jesu akanga asingachakwanisizve kupinda muguta pachena, asi akaramba ari kunze munzvimbo dzisina vanhu. Asi vakaramba vachiuya kwaari vachibva kumativi ose.+